Ithegi: ukwenziwa kweentengiso | Martech Zone
Maka: ulungiso lwentengiso
Luthetha ntoni uhlaziyo lweeNtengiso eziJikelezayo zikaGoogle kumaPhulo eAdWords?
NgoLwesibini, Septemba 19, 2017 NgoLwesibini, Septemba 19, 2017 UChad Crowe
UGoogle uyafana notshintsho. Ke ngekhe kumangalise ukuba nge-29 ka-Agasti, inkampani ikhuphe olunye utshintsho kuseto lwazo lwe-Intanethi, ngakumbi ngokujikeleza kwintengiso. Umbuzo oyinyani ngulo- lithetha ntoni olu tshintsho lutsha kuwe, kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwentengiso kunye nokusebenza kwentengiso yakho? UGoogle ayingomntu ukunika iinkcukacha ezininzi xa besenza olo tshintsho, beshiya iinkampani ezininzi ziziva zisebumnyameni ngendlela
I-AdPushup: Lawula kwaye wandise iiNdawo zakho zeNtengiso
NgeCawa, Oktobha 23, 2016 NgeCawa, Oktobha 23, 2016 Douglas Karr
Njengompapashi, esinye sezigqibo ezinzima ekwenzeni imali kwindawo yakho yindawo eseleyo phakathi kokunyusa ingeniso okanye ukutshabalalisa amava akho. Sizamana nale bhalansi kwaye sibandakanya iintengiso ezijolise ngamandla ezihambelana nomsebenzisi. Ithemba lethu kukuba iintengiso zethu zandisa umxholo ngokunika iimveliso okanye iinkonzo ezinokuba luncedo. Icala elisezantsi, ewe, kukuba iindwendwe zesiza ziqala ukungahoyi